Sucuudiga Oo Eedeeyay Masuuliyiinta Soomaalida | Sanaagmedia — Warar Sugan
Sucuudiga Oo Eedeeyay Masuuliyiinta Soomaalida
Wasiirka degaanka, biyaha iyo beeraha ee Boqortooyada Sucuudiga Md Cabdiraxmaan Alfadli ayaa masuuliyiinta Soomaalida ku eedeeyay in ay ku fashilmeen hagaajinta maxsharrada xoolaha si xayiraadda looga qaado xoolaha Soomaalida.
Wargeyska Geeska Afrika oo soo xiganaya wargeyska Almadiina ee ka soo baxa Sucuudiga ayaa sheegay in wasiirku hadalkan yidhi Axaddii isaga oo la hadlayay maalgashadeyaasha beeraha iyo xoolaha ee degmada Maka Almukarama.
Waxa uu sheegay in xoolaha Soomaalidu wali yihiin kuwo xayiran, islamarkaana Soomaalidu ka soo bixi weyday heshiis hore u dhexmaray oo ah in ay hagaajiyaan heerka fayo qabka ee maxsharrada. Waxa uu sheegay in ay ilaalinayaan caafimaadka iyo badqabka dadkooda iyo guud ahaan muslimiinta xashka imanaysa.
“Muddooyinkii aynu soo dhaafnay waxaanu kulanay tiro ka mid ah wasiirrada Soomaalida, waxaanu ku heshiinay in ay ka soo baxaan shuruudda dhinaca maxsharrada ee laga rabo si aanu xayiraadda uga qaadno xoolaha oo ay u soo dhoofiyaan laakiin, waxaan ka xumahay in aanay ilaa imika ka soo bixin shuruudda,”Sidaas ayuu yidhi wasiirku.
Waxa kale oo uu sheegay in ay bilaabeen dalal ay ka soo dhoofsadaan xoolo si wax looga qabto hilib yaraanta ka dhalatay joojinta xoolaha Soomaalida.